बालबालिकामा ‘हेन्ड, फुट र माउथ डिजिज’ - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २३ आश्विन २०७५, मंगलवार १९:०६
विराटनगर, २३ असोज । विराटनगर महानगरपालिका आसपासका बालबालिकामा ‘ हात, खुट्टा र मुखको रोगको’ प्रकोप बढेर गएको छ । यसलाई चिकित्सकले १० वर्ष मुनीका बालबालिकामा देखा परेको नयाँ भाईरल संक्रमण भनेका छन् ।
गर्मी कम भएर जाडो मौशम सुरु हुँदै जाँदा देखा परेको रोगले प्रकोपकै रुप लिएको चिकित्सकले बताएका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा उपचार र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउने बालबालिकामा नयाँ रोग देखा परेको र यसले प्रकोपको रुप लिंदै गएको बाल रोग विशेषज्ञ डा. अरुण गिरीले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार यो रोग देखा परेका बालबालिकाको हत्केला, पैताला र मुख भित्र साना–साना पानी फोका जस्तो विविरा आउँछन् । त्यही फोका बढ्दै गएर ठूलो घाउ बन्ने र त्यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या सिर्जना गर्ने डा. गिरीको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार पछिल्लो समय उपचारका लागि ल्याइने एक सय जना बालबालिका मध्ये १० देखि २० जना सम्ममा यो समस्या देखा पार्न थालेको छ ।
कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका बरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. विमल अग्रवालले यो समस्या देखा परेका बालबालिकामा हत्केला, पैताला र मुख भित्र घाउ आउने, अत्यधिक ज्वरो आउने, र्याल झारिरहने, हात खुट्टा पोल्ने, खाने कुरा र दूध खान नमान्ने, धेरै रुने लक्षण देखा पर्ने जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले खेलौना, कपडा, जुठो खानेकुरा लगायत बच्चाले प्रयोग गर्ने विभिन्न सामानका माध्यमबाट अर्को बच्चामा चाँडो सर्ने बताउनु भयो । डा. अग्रवालले विशेष गरेर रोग लाग्न नदिन बालबालिकाको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने र बाहिरी जमघट तथा भीडभाडबाट अलग्गै राख्नु पर्ने बताउनु भयो ।
यसका बारेमा नबुझेर कसैले आफूखुसी उपचार गराउन खोजेमा त्यसले उल्टो असर गर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
सोलुखुम्बुमा ६ जना गर्भवतीको अकालमै ज्यान गयो
Viagra Gold no rx, lioresal reviews. सल्लेरी, सोलुखुम्बु, २५ जेठ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ...
विराटनगर, १९ असार । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि प्रदेश सरकारका योजनामा परेका बजेट खर्च...